STE-taxane Mashiinka Faahfaahinta Farsamada -Wuxi Daya Technology Co., Ltd.
ST-taxane ah Faahfaahinta Mashiinka Mashiinka
STA-taxane ah Mashiinka Mashiinka Faahfaahinta
STC-taxane Mashiinka Faahfaahinta Farsamada
STE-taxane Mashiinka Faahfaahinta Farsamada
C Mashiinka Farsamaynta Mashiinka
C Frame Single Crank Mechanical Press (taxanaha ST)
C Frame Single Crank Mechanical Press (taxanaha STX)
C Frame Double Crank Mechanical Press (taxanaha STC)
Mashiinka Saxaafadda ee Mashiinka Fudud
Qaab-dhismeedka Solid Mashiinka Farsamada ee Hal-abuurka ah (taxanaha STD)
Mawqifka adag ee laba jibbaaran Mechanical Press (taxanaha STE)
Toosan Dhinaca Farsamada ee Farsamada (taxanaha STF)
Semi Xiran Hal ku-dheji Saxaafadeed (taxane STB)
C Frame Servo Press (taxanaha STA)
Toosan Side Servo Press (taxanaha STP)
Saxaafadda Xawaaraha Sare
C Mawjada Xawaare Sare ee Xajmiga (taxanaha C)
Toosan Side Xawaare Sare Xawaare
Toosan Side Shan Wareeg Hagaha Tilmaamaha Saxaafadda (taxanaha HS)
Toosan Side Xawaare Sare Xawaare Sare (EL taxane)
Toosan Dhinaca Xawaaraha Sare ee Xajmiga Gawaarida Gawaarida iyo rotor (taxanaha HHD)
Toggle Joint Speed ​​Speed ​​Press (taxane dhakhso leh)
Jiid Down Speed ​​Speed ​​Press (taxanaha HX)
3IN 1NC Mashiinka Quudinta Servo
Mashiinka Quudiyaha Servo
Afarta aaladaha dhidibka
Lix aalado dhidibka
Qaybaha shaabad ku dhufashada
Barxada wiishka mobilada
600 Ton Toosan Side Double Point Crank Sax Sax
1 Qaabka qalabka, magaca iyo tirada:
600Ttoosan dhinac labanlaab tilmaam saxnaanta saxeexa saxda ah
Nalalka caarada + beddelaadda soo noqnoqda + aaladda saliidda khafiifka ah ee wareejisa qalabka + xajinta qoyan
2 Shuruudaha tamarta iyo deegaanka
Voltage Awood koronto: 380V ± 10%, saddex waji oo shan-silig ah
Pressure Cadaadiska hawada: cadaadiska 0.6 ~ 0.8mpa
Temperature Heerkulka hawlgalka: -10 ℃ ~ 50 ℃
Hum Shaqeynta huurka: ≤ 85%
3 Heerka hirgelinta qalabka
⑴ GB / T 10924-2009 "Saxnimada saxafiga dhinaca farsamada straight
⑵ GB / T5226.1-2002 "Shuruudaha guud ee farsamada ee mashiinada warshadaha iyo qalabka korontada"
⑶ GB5226.1—2002 《Qalabka Farsamada ee farsamada badbaadada Farsamada - qeybta I xaaladaha guud ee farsamada"
JB / T1829—1997 《Xaaladaha guud ee farsamada been abuurka saxaafadda"
⑸ GB17120-1997 《Amniga iyo xaaladaha farsamo ee mashiinada been abuurka ah"
JB / T9964—1999 《Shuruudaha farsamo ee saxaafadda toosan dhinaca farsamada"
B JB / T8609-1997 "Alxanka xaaladaha shuruud farsamo ee been abuur saxaafadda"
3.1 Qalabku wuxuu waafaqsan yahay heerka JIS ee heerka 1aad ee baaritaanka saxda ah ：
Japan JIS 1 fasal
Flatness - Qiimaha la ogol yahay ee ku xeeran sagxadda hoose ee shaqada（Mm）
Isbarbardhigga - qiimaha la oggol yahay inta u dhexeysa dusha hoose ee slider iyo hoose ee shaqada（Mm）
Jaangooyada sariirta oo kor iyo hoos ula socota dusha hoose ee shaqada - qiimaha la oggol yahay（Mm）
Verticality - Qiimaha la oggol yahay ee dhinta daloolka shank si uu ugeeyo dusha hoose（Mm）
Wadarta nadiifinta - qiimaha la oggol yahay ee farsamada hawlgalka sare iyo hoose（Mm）
4 Qalabka ugu muhiimsan
Alxanka saxanka bir isku dhafan
Qaab dhismeedka hage yar
Laba qodob iyo lix wadiiqo
Dhererka safarka slider
Dhererka ugu sarreeya ee
Isku hagaajinta slider
Safarada joogtada ah daqiiqad kasta
Cabirka shaqada sare (bidix iyo midig x kahor iyo kadib)
Cabirka hoose ee shaqada (bidix iyo midig x kahor iyo kadib)
Awoodda korantada ugu weyn + beddelaha soo noqnoqda
55 x 4 + Beddelka Joogtada
Darajada saxda ah
Japan JIS heerka 1
5. Shuruudaha farsamada
5.1 Astaamaha qaabdhismeedka guud iyo qaababka
(1) Daaweynta soo noqnoqodka sare ee tareenka hagaha tareenka, adkaanta kor ku xusan hrc45,
Faa'iidooyinka:si weyn u wanaajiyey iska caabin ah. (soosaarayaasha kale malaha daaweyn fara badan oo deminta)
(2) Qulqulka dusha sare ee slider iyo tareenka hagaha ayaa u sarreeya sida ra0.4-ra0.8,
Faa'iidooyinka:saxnaan sare iyo duug hoose. (ma jiro damin iyo daweyn daaweyn ah shirkadaha soo saarayaasha kale)
(3) flatness ee tareenka hage slide waa 0.01mm / m, saxsanaanta waa sare.
Faa'iidooyinka:saxsanaanta si weyn ayaa loo hagaajiyay. (soosaarayaasha kale ee ka sarreeya 0.03mm / m)
(4) Dhammaan qeybaha wareegga hawada waa SMC Japan. (soosaarayaasha kale guud ahaan waxay isticmaalaan wax soo saarka gudaha).
(5) Waxaan u qaadaneynaa nooca loo yaqaan 'MAC MAC' ee loogu talagalay hawada hawada lagu buufiyo qalabka 'solenoid valve', oo leh xasaasiyad sare oo falcelinta buufinta hawada.
(6) Crankshaft-ka laga sameeyay 42crda ayaa ugu fiican Shiinaha
Faa'iidooyinka:Awooddu waa 30% ka sarreeysaa tan 45 bir, nolosha adeeguna way ka sii dheer tahay. (soosaarayaasha kale guud ahaan waxay isticmaalaan 45 bir)
(7) Gacanta naxaasku waxay ka samaysan tahay zqsn10-1 (Tin Phosphorus Bronze) (oo la mid ah Aida copper arm). Soosaarayaasha kale waxay korsadaan bc6 (naxaas awood sare leh, oo sidoo kale loo yaqaan naxaasta 663), waxay leedahay 50% awood ka sareysa (cadaadiska dusha sare) marka loo eego naxaasta caadiga ah, waana mid aad u adkeysi badan oo adkeysi Saxnimo dheer iyo nolol adeeg dheer.
(8) Dhammaan dhuumahayagu waa Φ 6, wareegga saliiduna waa siman yahay mana fududa in la xannibo. (soosaarayaasha kale badanaa waxay isticmaalaan Φ 4)
(9) Kursiga kubbadda wuxuu korsadaa Japan-TM-3 daawaha naxaasta ah (oo isku mid ah sida Aida)
Faa'iidooyinka: suurtagalnimada qaniinyada si weyn ayaa loo yareeyay (soosaarayaasha guud waa bir bir ah).
Impact Saamaynta deegaanka
Alaabtaan wax saameyn ah kuma lahan deegaanka mana soo saari doonto gaas waxyeello leh.
Ling Qabashada iyo rakibidda
⑴ Gaadiidka iyo keydinta qalabka:
① Qalabku wuxuu qaataa tallaabo habboon oo ka hortagga miridhku, gariirka anti-gariirka iyo ka-hortagga saamaynta ee geeddi-socodka baakadaha, kaas oo dammaanad qaadi kara gaadiidka iyo kaydinta 5 ° c ~ 45 ° c.
Marka qalabka la rarayo lana keydinaayo, waa in fiiro gaar ah loo yeesho. Qalabka iyo xirxirida banaanka waa inaysan si toos ah u soo gaadhin roob ama biyo, xirxirka banaankana waa inaan la dhaawicin.
⑵ Qaadista qalabka:
Markii wiish lagu qaadayo ama laga soo dejinayo, salka ama dhinaca badeecada laguma ridi karo naxdin ama gariir xoog leh.
Ka qaad oo nadiifi filimka balaastigga ah ee lagu duubay banaanka, ka saar fiilada, oo rakib isku xiraha tuubada PU1 iyo tuubada PU, dhererka biibiile PU waa qiyaastii 700mm.
5.2 Qaab dhismeedka ugu weyn
Parts Qaybaha farsamada
Qaabku wuxuu kuxiran yahay walxaha Q235B. Alxanka ka dib, tempering waxaa loo sameeyaa si loo baabi'iyo walaaca gudaha ee maaddada. Jidka tareenka hagaha Fuselage oo leh laba geesood oo ah lixda hagitaan.
Type Nooca gudbinta
Qalabka gudbinta, crankshaft iyo usha isku xirka ayaa lagu soo ururiyey qaybta sare ee saxaafadda. Mashiinka ugu weyn waxaa lagu rakibay dusha cabbirka gadaashiisa ee jir, duufaan, xajin, iwm
Meesha ay ku taal dhinaca dambe ee jirku, duuliyaha waxaa lagu tijaabiyay dheelitirka ka hor kulanka.
Qaybta qalabka waxay qaadataa habka gudbinta iliga ee tooska ah, qalabkeedana wuxuu ka sameysan yahay bir daawaha oo xoog badan oo 42CrMo ah, daaweynta kuleylka ee u dhiganta ayaa la sameeyaa.
Qalalan xajin / qaboojiye hooseeya. Nidaamka xakamaynta xajinta / jejebinta waxaa lagu qalabeeyaa qalab lagu ogaanayo oo aan caadi ahayn.
Dhammaan fallaadhihii helayaa waxay ka samaysan yihiin walxo u adkaysta maqaar-gashi iyo naxaas fosfooras ah.
Slider wuxuu ka samaysan yahay maaddada HT250. Tilmaamuhu wuxuu korsanayaa hage laba-geesood ah oo lix-geesood leh oo tilmaamaya,
Dusha hoose ee boodhka boodhka iyo dusha sare ee miiska waxay leeyihiin T-jeexdin, taas oo loo isticmaalo in lagu rakibo caaryada. Dhererka boodhka isdabajoogga waxaa lagu hagaajiyaa matoor koronto oo ka badan 80 tan (oo ay ku jiraan).
Qaado nidaamka ilaalinta xad-dhaafka ah ee hidda-shidaalka
Ub Nidaamka wax soo saarka
Saxaafadda waxaa lagu saliiday subag koronto waxaana ku qalabeysan nidaam digniinta heerka saliida oo hooseysa, sidaas darteed waa amaan waana la isku halleyn karaa. Barbaraha waa: bamka quudinta subagga gacanta.
Dheelitirka nidaamka qalabka
Qaado nooca isku-dheellitir la'aanta slide nooca cadaadiska hawada, Cadaadiska hawada waxaa lagu xakamayn karaa qalabka cadaadiska hawada xukuma.
Part Qaybta korantada
Qalabka korontada waxaa gacanta ku haya PLC, oo ku qalabeysan is dhexgalka mashiinka aadanaha, oo ay soo bandhigeen shaashadda taabashada ee noocyada caanka ah.
Lagu dhejiyay qaybta hawlgalka ugu weyn, howlaha soo socda ayaa lagu gaari karaa:
Screen Shaashada taabashada waxay soo bandhigeysaa xarfaha Shiinaha (ama udhaxeeya Shiinaha iyo Ingriiska), taas oo ah mid fudud oo sahlan in la fahmo, waxayna muujineysaa xaddidaadyo kala duwan oo saxaafadda ah, sida tirada istaroogyada, elektaroonigga CAM elektarooniga ah, iwm. lagu dejiyo shaashadda taabashada;
Muuji socodka shaqada ee saxaafadda, si hawlwadeenku ugu hawlgalo saxaafadda si fudud,oo leh tilmaanta ugu weyn ee socodka gobolka ；
③ Bandhigga macluumaadka hawlgalka iyo fashilka, si hawl wadeennada iyo dayactirayaashu ay si dhakhso leh u xalliyaan dhibaatooyinka saxaafadda, u yareeyaan xilliyada shaqada;
Waxqabadka gelinta / soosaarida PLC waxqabadka waqtiga kormeerka dhabta ah;
Deji shaashadda tirinta badeecada, oo soo bandhigi karta tirada wax soo saarka ee waqtiga dhabta ah, oo deji tirada bartilmaameedka ee qaybaha shaqada.
Press Saxaafadda xakamaynta korontada waxay qaadataa koronto saddex-waji ah, 380V, 50Hz.
Motor Mashiinka ugu weyn waxaa lagu qalabeeyaa culeyska kaamerada iyo xawaaraha eber ee kahortagga dib u noqoshada.
⑧ Xaqiijinta hawl kasta oo xakameynta feerku waxay leedahay silsilad nabadgelyo oo u dhiganta. Gudigu wuxuu ku qalabeysan yahay iftiinka tilmaanta cilladda iyo badhanka dib-u-dejinta si uu u dhammaystiro shaqada dib-u-dejinta ka dib xaqiijinta cilladda.
5.3 Qaabka hawlgalka
Riix faleebo qaawan, hal, seddex qaab oo hawlgal joogto ah. Habka shaqada waxaa lagu doortaa badhanka oo badhtamihiisa ayaa lagu xakameeyaa badhanka.
5.4 Tallaabooyinka amniga
Button Badhanka joojinta degdegga: riix batoonka "deg deg deg deg ah" haddii ay dhacdo hawl aan caadi ahayn oo saxaafadda ah. Saxaafaddu waxay leedahay saddex badhan oo joojinta degdegga ah.
Mid ka mid ah guddiga xakamaynta hawlgalka, mid ka mid ah tiirarka, mid ka mid ah miiska hawlgalka ee labada gacmood; Riix mid kasta oo ka mid ah badhanka joojinta degdegga saxaafadduna si dhakhso leh ayey u joogsan doontaa. Mawqifka badhanka joojinta degdegga ah ee ku yaal khaanadda ayaa qiyaastii 1.2 mitir u jirta dhulka, kaas oo buuxiya shuruudaha ergonomics;
Button Badhanka hawl laba-gacmeed: laba-gacan hoos u dhigista waqtiga isku-xirka waqtiga waa 0.2-0.5s;
Protection Difaaca culeyska: boodhka isdabajoogga waxaa lagu qalabeeyaa nidaamka ka hortagga culeyska xad dhaafka ee Haydarooliga si loo hubiyo in saxaafaddu aysan waxyeello u geysan doonin saxaafadda ayna u dhimanayso culeys saa'id ah.
Culeys badan ka dib slider-ka oo joogaya meesha ugu hooseysa ee dhinta, wuxuu isticmaali karaa oo keliya cuncun, dib ugu noqoshada meesha ugu sareysa ee dhimista hagaajinta iyo cadaadiska, shaqada.
6. Dejinta qalabka
6.1 Qaybta ugu weyn ee dhismaha
Qalabka, hababka daaweynta
Gabal aasaasi ah
Qalabka 42CrMo, la demiyey oo la qaboojiyey Hs42. 20
Qalabka dixiriga ah
Qalabka ZQSn10-1 Tin phosphor bronze
Qalabka 40Cr, la demiyey oo la qaboojiyey Hs40 ± 20
Qalabka QT-500 daaweynta daweynta
Madaxa kubbada Sawtooth
Qalabka HT-250, Joogtaynta sare ee daminta hrc45 darajo ee kor ku xusan
Copper (gacanka naxaas)
6.2 Qaybaha ugu muhiimsan soo saaraha / sumadda
Soo saaraha / sumadda
Mashiinka ugu weyn
Mashiinka hagaajinta gawaarida
Relay dhexdhexaad ah
Biriigu xajin qallalan
Waalka Double solenoid
Relay kulaylka, isku xira kaaliyaha
Waalka yareynta cadaadiska
Bamka bamka culus
Jabbaan howa Showa
Mashiinka saliidda ku shubaya saliidda
Qaadista ugu weyn
Lugta ka hortagga gariirka
Beddelaad qaybo badan
Qalabka hawada afuufaya
Nalalka dhimirka iftiinka
Isku xirka ogaanshaha khaldan waa la keydiyay
Fiilooyinka iyada oo loo marayo PLC
Qalabka ilaalinta sawir qaadaha
6.3 Qalabka, liiska qalabka gaarka ah
Ikhtiyaar / heer
Qalabka dayactirka iyo sanduuqa qalabka
6.4 Qalab gaar ah (ikhtiyaariyada ah) liiska
Qalabka baaritaanka khaldan
Qalabka ogaanshaha barta dhimashadda
Qalab beddelaya caaryada
Suufka dhinta (barkinta hawada)
Wargeyskeena Toddobaadlaha ah
Qof kasta oo ka fekeraya shirkadeena iyo alaabteenna,
fadlan nala soo xiriir adigoo noo soo diraya emayl ama si dhakhso leh noola soo xiriir.
Cinwaanka:NO.17, Xingzhou Road, Qianzhou Town, Wuxi City, Gobolka Jiangsu, Shiinaha